Florentino Perez oo go’aan kama dambeys ah ka soo saaray arinta ku aadan heshiiska Kylian Mbappe – Gool FM
(Madrid) 24 Juunyo 2019. Wargeyska “AS” ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez, uu go’aansaday inuu lasoo saxiixdo weeraryahaka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé xagaaga soo aadan.
20 jirka reer France ayaa xagaagan lala xiriirinayay Real Madrid, gaar ahaan maadaama uu laacibka si xoogan u doonayo inuu la shaqeeyo macalinka ay isku dadanka kasoo wadajeedaan ee Zinedine Zidane.
Laakiin wargeyska Isbaanishka ah ayaa sheegay in heshiiska uu dib u dhici doono, islamarkaana uu noqon doono xagaaga soo socda, maadaama uu Florentino Perez go’aansaday inuu lasoo saxiixdo Kylian Mbappé xagaaga soo aadan.
Wargeyska “AS” ayaa tilmaamay in bar-tilmaameedka koowaad uu Real Madrid u noqon xili ciyaareedka soo socda kaliya saxiixa Kylian Mbappé, kaddib markii ay ku guuleysteen in ilaa iyo haatan xagaagan ay dhameystiraan 5 heshiis ee cusub.
Wargeyska ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in lasoo shaxiixashada Kylian Mbappé ee suuqan xagaaga aysan ahayn mid macquul ah, gaar ahaan ka dib markii Real Madrid suuqan xagaaga ku bixisay inkabadan 280 milyan oo euros.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Kylian Mbappé ee kooxdiisa Paris Saint-Germain uu ku egyahay xagaaga 2022.